Mucheka uyu unogona kuve unodzora mafuta pasina fluorocarbon yekupedzisa mumiriri, inova imwe nhanho mukusimudzirwa kwegirini kwemaindasitiri emachira - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Mucheka uyu unogona kuve unodzora mafuta pasina fluorocarbon yekupedzisa mumiriri, inova imwe nhanho mukusimudzirwa kwegirini kwemaindasitiri emachira
Oiri-chiratidzo chemachira imhando yemachira ekupfeka akakodzera, izvo zvisiri nyore kusvibiswa nemafuta, nyore kuchenesa, kuderedza mari yekuchengetedza yevatengi, saka inozivikanwa kwazvo mumusika wevatengi.
Fluorocarbon makomponi (PFC), sevapedzisi vamiriri veakadzika epasi masimba machira, inogona kunyatso kugadzirisa iyo isina mvura / oiri-chiratidzo chemidziyo yemachira. Zvikuru sei, refu-cheni fluorocarbon ma polima akambove akakosha zvigadzirwa mumusika. zvisinei, fluorocarbons inogona kukanganisa hutano hwevanhu uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza panguva yekushandisa kwavo, uye zvavanogadzira hazvisi nyore kudzikisirwa nharaunda. European Union yakatemera mutemo pakutengesa uye kushandiswa kwePFOS nePFOA mu 2008. saka, kutsvaga nekuvandudza zvinotsiva nyowani chave chakakosha chikamu chemachira chemakemikari indasitiri uye yekushongedza yemachira uye yekupedzisa indasitiri pasirese.
Columbia University nguva pfupi yadarika yakazivisa mhando nyowani yemafuta-anodzinga machira asingashandise PFC mukugadzirira kwayo. Vatsvakurudzi vanowedzera maratidziro pamusoro peimwe fiber, uye kudzora pamusoro chemakemikari yeiyo fiber zvinhu nekudzora saizi uye nzvimbo yekusiyana kweiyo machira, kuitira kuti uone basa rayo rinodzora mafuta. Mhedzisiro yekuyedza yakaratidza kuti machira anga asiri kunyorova apo kumeso kwepasirese kwakadzikira se23.9mn / m, uye yaive nemhedzisiro yekuparadzanisa mafuta akabikwa, mafuta omuorivhi uye mafuta ekasitori.
Iyo yekugadzirira musimboti inotevera: iyo yepamusoro yejira ndeye hydrophilic mushure meplasma etching. Huwandu hukuru hwemapoka ehydroxyl akaumbwa mushure meiyo hydrolysis yeTEOS inogona kuumba denderedzwa rekuita pamucheka. Mushure mekurapa, micro-nano mamiriro ane hukasha anogona kuvakwa. Uyezve, mushure mekunyudzwa mu silanol mhinduro, huwandu hukuru hwemapoka esilanol ari pamusoro pejira anogona kuita nesiloxane ye 1, 3-dichlorotetrachloromethyldisiloxane, nokudaro ichideredza simba rayo repamusoro. Pasi pemubatanidzwa weyakaomeswa mamiriro uye yakaderera nzvimbo simba, jira rine chivakwa chekudzora mafuta.
Pamusoro pe, nekuda kwechisungo chakabatana pakati pechinhu chepasi uye iyo fiber, inogona kuvapo zvine mutsindo mune yekuwacha kana kupfeka, iyo inovimbisa kusimba kwayo kune imwe nhanho. Ichi chidzidzo chinopa madhairekisheni ekusimudzira kusimudzira kwekuvandudza kweanoshanda machira zvigadzirwa.
Tsananguro yethesi: https://www.nature.com/articles/s41893-020-0591-9
(Kunobva: Yepamutemo Micro blog yeTextile Herald)
Iyo yekushandisa modhi inoenderana neyeakangwara simba rekuchengetedza fiber iyo inogona kusonwa, dzakarukwa uye dzinowachika